မေးစနှေ့ဈထပျဖွဈခွငျးကို လြှော့ကစြပွေီး ငယျရှယျနုပြိုစတေဲ့ လကေ့ငျြ့ခနျး (၇) ခု
Homehealth and fitnessမေးစနှေ့ဈထပျဖွဈခွငျးကို လြှော့ကစြပွေီး ငယျရှယျနုပြိုစတေဲ့ လကေ့ငျြ့ခနျး (၇) ခု
သငျဟာ အဝလှနျသူတဈယောကျ မဟုတျဘူးဆိုရငျ မှနျကွညျ့တဲ့အခါ မေးနှဈထပျဖွဈနခွေငျးက အတျောကို စိတျအနှောငျ့အယှကျ ဖွဈစပေါတယျ။ ဒါပမေယျ့ မေးအောကျဘကျတဈဝိုကျမှာ အဆီပိုတှေ ရှိနခွေငျးက အဝလှနျမှု တဈခုတညျးကွောငျ့ မဟုတျပါဘူး။
1.အစားလြှော့စားတာ နညျးလမျးမမှနျရငျ သငျ့ခန်ဓာကိုယျအတှကျ လိုအပျတဲ့ ဗီတာမငျနဲ့သတ်ထုတှကေ အသားအရအေတှကျ အာဟာရ မဖွဈစပေါဘူး။ အဲဒီအခါ မေးနှဈထပျဖွဈပွီး ကွညျ့ရဆိုးစပေါတယျ။
2.အသကျအရှယျကွီးလာတဲ့အခါ အရပွေားက ဆနျ့နိုငျကြုံနိုငျတဲ့သတ်တိတှေ အားနညျးလာပွီး မေးနှဈထပျဖွဈလာစပေါတယျ။
3.ကိုယျနဟေနျထားမမှနျတဲ့အခါ မကျြနှာနဲ့လညျပငျးမှာရှိတဲ့ ကွှကျသားတှေ အားနညျးလာပွီး မေးနှဈထပျဖွဈလာစပေါတယျ။
အစားအသောကျနဲ့ ကိုယျနဟေနျထားကို ပွောငျးလဲနိုငျပမေယျ့ အသကျအရှယျကွီးလာတာကိုတော့ ရှောငျလှဲလို့မရပါဘူး။ မကျြနှာနဲ့ လညျပငျးက ကွှကျသားတဈသြှူးတှကေို ဖွလြှေော့ပေးပွီး မေးနှဈထပျဖွဈတာကို လြော့ကစြမေယျ့ လကေ့ငျြ့ခနျးအနညျးငယျ ရှိပါတယျ။ ဒီလကေ့ငျြ့ခနျးတှေ မလုပျခငျမှာ လညျပငျးကို တဈဖကျစီ ညငျသာစှာ လှညျ့ပေးခွငျးဖွငျ့ သှေးပူလကေ့ငျြ့ခနျးလုပျပါ။ ခေါငျးကို မော့လိုကျ၊ ငုံ့လိုကျ လုပျပေးပါ။
1. မကျြနှာကွကျကို ကွညျ့ပွီး လခြှေနျပါ။
ထိုငျခုံပျေါမှာ မတျမတျထိုငျပါ။ ခေါငျးမော့ပွီး လခြှေနျပေးလိုကျရုံပါပဲ။ ဒီလကေ့ငျြ့ခနျးကို 10 စက်ကနျ့ကနေ စက်ကနျ့ 20 ကွာအောငျ လုပျပေးရပါမယျ။
2. ကောငျးကငျကွီးကို အနမျးတှေ ပေးလိုကျပါ။
မကျြနှာကိုမော့ပွီး နှုတျခမျးကို ရှကေို့ဆနျ့ထုတျနိုငျသမြှ ဆနျ့ထုတျလိုကျပါ။ ဒီလကေ့ငျြ့ခနျးကို 10 စက်ကနျ့ကနေ စက်ကနျ့ 20 ကွာအောငျ လုပျရပါမယျ။
လကေို ပါးစပျထဲရှုသှငျးပွီး ပါးဖောငျးလိုကျပါ။ မကျြနှာနဲ့ မေးစမှေ့ာရှိတဲ့ ကွှကျသားတှေ တငျးနတောကို ခံစားရပါလိမျ့မယျ။ ဒီလကေ့ငျြ့ခနျးကိုလညျး 10 စက်ကနျ့ကနေ စက်ကနျ့ 20 ကွာအောငျ လုပျပေးပါ။
4. ဘောလုံးကို ညှဈပေးပါ။
တငျးနဈဘောလုံး ဒါမှမဟုတျ ပနျးသီးတဈလုံးကို ယူပါ။ အဲဒါတှမေရှိရငျ သငျ့ရဲ့လကျသီးဆုပျကို အသုံးပွုနိုငျပါတယျ။ တငျးနဈဘောလုံးကို မေးစအေ့ောကျမှာထားပွီး ရငျဘတျပျေါထိ နာနာဖိပေးပါ။ တငျးနဈဘောလုံးကို တှနျးဖို့ လညျပငျးကွှကျသားတှကေို အသုံးပွုပေးပါ။
5. ပါးစပျကို ဟထားပါ။
ခေါငျးကိုမော့ကာ မကျြနှာကွကျကိုကွညျ့ပွီး ပါးစပျကို ဟထားပါ။ ပွီးတော့ ပါးစပျကို ဖှငျ့လိုကျပိတျလိုကျလုပျပေးပါ။ ဒီလကေငျြ့ခနျးကိုတော့3စက်ကနျ့ကနေ5စက်ကနျ့ကွာအောငျ လုပျပေးလို့ရပါတယျ။
6. ပါးထဲကို လစေုပျယူလိုကျပါ။
မေးကိုမော့ပွီး ပါးထဲကို လစေုပျယူလိုကျပါ၊ အဲဒီအခါ မကျြနှာနဲ့လညျပငျးကွှကျသားတှေ တငျးလာတာကို ခံစားရပါလိမျ့မယျ။ ဒီလကေ့ငျြ့ခနျးကို 10 စက်ကနျ့ကနေ စက်ကနျ့ 20 ကွာအောငျ လုပျပေးနိုငျပါတယျ။
7. ပါးစပျကို အကယျြကွီး ဟလိုကျပါ။
ပါးစပျကို ကယျြနိုငျသမြှ ကယျြကယျြဟပွီး လြှာကို အပွငျထုတျလိုကျပါ။ ဒီလကေ့ငျြ့ခနျးကိုလညျး 10 စက်ကနျ့ကနေ စက်ကနျ့ 20 ကွာအောငျ လုပျရပါမယျ။ ဒီလကေ့ငျြ့ခနျးလုပျခွငျးဖွငျ့ မေးစေ့၊ လညျပငျးနဲ့ မကျြနှာမှာရှိတဲ့ ကွှကျသားတှကေို သနျမာလာစပေါတယျ။
အထကျပါလကေ့ငျြ့ခနျးတှကေို နတေို့ငျးလုပျပေးခွငျးဖွငျ့ မကျြနှာကွှကျသားတှေ ကွံ့ခိုငျသနျမာလာစပေါတယျ။ သှေးလညျပတျမှုကိုလညျး တိုးတကျစပေါတယျ။ မလိုခငျြတဲ့ မေးနှဈထပျဖွဈမှုကိုလညျး ကာကှယျပွီးသား ဖွဈစပေါတယျ။
မကျြနှာနဲ့ လညျပငျးကလညျး တခွားခန်ဓာကိုယျ အစိတျအပိုငျးတှလေိုပဲ အရေးကွီးပါတယျ။ သူတို့လညျး ကနျြးမာဖို့လိုပါတယျ။ ဒီလကေ့ငျြ့ခနျးတှကေို နစေ့ဉျလုပျပေးခွငျးဖွငျ့ ငယျရှယျနုပြိုကနျြးမာမှုကို ထိနျးသိမျးနိုငျပါတယျ။
မေးစေ့နှစ်ထပ်ဖြစ်ခြင်းကို လျှော့ကျစေပြီး ငယ်ရွယ်နုပျိုစေတဲ့ လေ့ကျင့်ခန်း (၇) ခု
သင်ဟာ အဝလွန်သူတစ်ယောက် မဟုတ်ဘူးဆိုရင် မှန်ကြည့်တဲ့အခါ မေးနှစ်ထပ်ဖြစ်နေခြင်းက အတော်ကို စိတ်အနှောင့်အယှက် ဖြစ်စေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မေးအောက်ဘက်တစ်ဝိုက်မှာ အဆီပိုတွေ ရှိနေခြင်းက အဝလွန်မှု တစ်ခုတည်းကြောင့် မဟုတ်ပါဘူး။
1.အစားလျှော့စားတာ နည်းလမ်းမမှန်ရင် သင့်ခန္ဓာကိုယ်အတွက် လိုအပ်တဲ့ ဗီတာမင်နဲ့သတ္ထုတွေက အသားအရေအတွက် အာဟာရ မဖြစ်စေပါဘူး။ အဲဒီအခါ မေးနှစ်ထပ်ဖြစ်ပြီး ကြည့်ရဆိုးစေပါတယ်။
2.အသက်အရွယ်ကြီးလာတဲ့အခါ အရေပြားက ဆန့်နိုင်ကျုံနိုင်တဲ့သတ္တိတွေ အားနည်းလာပြီး မေးနှစ်ထပ်ဖြစ်လာစေပါတယ်။
3.ကိုယ်နေဟန်ထားမမှန်တဲ့အခါ မျက်နှာနဲ့လည်ပင်းမှာရှိတဲ့ ကြွက်သားတွေ အားနည်းလာပြီး မေးနှစ်ထပ်ဖြစ်လာစေပါတယ်။
အစားအသောက်နဲ့ ကိုယ်နေဟန်ထားကို ပြောင်းလဲနိုင်ပေမယ့် အသက်အရွယ်ကြီးလာတာကိုတော့ ရှောင်လွှဲလို့မရပါဘူး။ မျက်နှာနဲ့ လည်ပင်းက ကြွက်သားတစ်သျှူးတွေကို ဖြေလျှော့ပေးပြီး မေးနှစ်ထပ်ဖြစ်တာကို လျော့ကျစေမယ့် လေ့ကျင့်ခန်းအနည်းငယ် ရှိပါတယ်။ ဒီလေ့ကျင့်ခန်းတွေ မလုပ်ခင်မှာ လည်ပင်းကို တစ်ဖက်စီ ညင်သာစွာ လှည့်ပေးခြင်းဖြင့် သွေးပူလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပါ။ ခေါင်းကို မော့လိုက်၊ ငုံ့လိုက် လုပ်ပေးပါ။
1. မျက်နှာကြက်ကို ကြည့်ပြီး လေချွန်ပါ။
ထိုင်ခုံပေါ်မှာ မတ်မတ်ထိုင်ပါ။ ခေါင်းမော့ပြီး လေချွန်ပေးလိုက်ရုံပါပဲ။ ဒီလေ့ကျင့်ခန်းကို 10 စက္ကန့်ကနေ စက္ကန့် 20 ကြာအောင် လုပ်ပေးရပါမယ်။
2. ကောင်းကင်ကြီးကို အနမ်းတွေ ပေးလိုက်ပါ။
မျက်နှာကိုမော့ပြီး နှုတ်ခမ်းကို ရှေ့ကိုဆန့်ထုတ်နိုင်သမျှ ဆန့်ထုတ်လိုက်ပါ။ ဒီလေ့ကျင့်ခန်းကို 10 စက္ကန့်ကနေ စက္ကန့် 20 ကြာအောင် လုပ်ရပါမယ်။
လေကို ပါးစပ်ထဲရှုသွင်းပြီး ပါးဖောင်းလိုက်ပါ။ မျက်နှာနဲ့ မေးစေ့မှာရှိတဲ့ ကြွက်သားတွေ တင်းနေတာကို ခံစားရပါလိမ့်မယ်။ ဒီလေ့ကျင့်ခန်းကိုလည်း 10 စက္ကန့်ကနေ စက္ကန့် 20 ကြာအောင် လုပ်ပေးပါ။
4. ဘောလုံးကို ညှစ်ပေးပါ။
တင်းနစ်ဘောလုံး ဒါမှမဟုတ် ပန်းသီးတစ်လုံးကို ယူပါ။ အဲဒါတွေမရှိရင် သင့်ရဲ့လက်သီးဆုပ်ကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ တင်းနစ်ဘောလုံးကို မေးစေ့အောက်မှာထားပြီး ရင်ဘတ်ပေါ်ထိ နာနာဖိပေးပါ။ တင်းနစ်ဘောလုံးကို တွန်းဖို့ လည်ပင်းကြွက်သားတွေကို အသုံးပြုပေးပါ။
5. ပါးစပ်ကို ဟထားပါ။
ခေါင်းကိုမော့ကာ မျက်နှာကြက်ကိုကြည့်ပြီး ပါးစပ်ကို ဟထားပါ။ ပြီးတော့ ပါးစပ်ကို ဖွင့်လိုက်ပိတ်လိုက်လုပ်ပေးပါ။ ဒီလေကျင့်ခန်းကိုတော့3စက္ကန့်ကနေ5စက္ကန့်ကြာအောင် လုပ်ပေးလို့ရပါတယ်။
6. ပါးထဲကို လေစုပ်ယူလိုက်ပါ။
မေးကိုမော့ပြီး ပါးထဲကို လေစုပ်ယူလိုက်ပါ၊ အဲဒီအခါ မျက်နှာနဲ့လည်ပင်းကြွက်သားတွေ တင်းလာတာကို ခံစားရပါလိမ့်မယ်။ ဒီလေ့ကျင့်ခန်းကို 10 စက္ကန့်ကနေ စက္ကန့် 20 ကြာအောင် လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
7. ပါးစပ်ကို အကျယ်ကြီး ဟလိုက်ပါ။
ပါးစပ်ကို ကျယ်နိုင်သမျှ ကျယ်ကျယ်ဟပြီး လျှာကို အပြင်ထုတ်လိုက်ပါ။ ဒီလေ့ကျင့်ခန်းကိုလည်း 10 စက္ကန့်ကနေ စက္ကန့် 20 ကြာအောင် လုပ်ရပါမယ်။ ဒီလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းဖြင့် မေးစေ့၊ လည်ပင်းနဲ့ မျက်နှာမှာရှိတဲ့ ကြွက်သားတွေကို သန်မာလာစေပါတယ်။
အထက်ပါလေ့ကျင့်ခန်းတွေကို နေ့တိုင်းလုပ်ပေးခြင်းဖြင့် မျက်နှာကြွက်သားတွေ ကြံ့ခိုင်သန်မာလာစေပါတယ်။ သွေးလည်ပတ်မှုကိုလည်း တိုးတက်စေပါတယ်။ မလိုချင်တဲ့ မေးနှစ်ထပ်ဖြစ်မှုကိုလည်း ကာကွယ်ပြီးသား ဖြစ်စေပါတယ်။
မျက်နှာနဲ့ လည်ပင်းကလည်း တခြားခန္ဓာကိုယ် အစိတ်အပိုင်းတွေလိုပဲ အရေးကြီးပါတယ်။ သူတို့လည်း ကျန်းမာဖို့လိုပါတယ်။ ဒီလေ့ကျင့်ခန်းတွေကို နေ့စဉ်လုပ်ပေးခြင်းဖြင့် ငယ်ရွယ်နုပျိုကျန်းမာမှုကို ထိန်းသိမ်းနိုင်ပါတယ်။